Lahatsoratra nataon'i Robby Slaughter momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Robby Slaughter
Tsy nisy ny tsy fahampian'ny hetsika media sosialy nandritra ireo tranga mampalahelo tato ho ato tao Boston. Ny ony Facebook sy Twitter anao dia be loatra noho ny atiny nanondro ireo fisehoan-javatra niseho isa-minitra. Raha ny marina, ny ankamaroany dia tsy misy dikany ivelan'ny teny manodidina. Tsy misy ihany koa ny tsy fahampian'ny mpitantana mari-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy izay nanararaotra ny fomba fanao tsara indrindra nandritra ny krizy. Stacy Wescoe nanoratra hoe: “Tsy maintsy nijanona aho ary nilaza hoe: 'Tsia, tsy manao izany ny olona
Alarobia, Desambra 7, 2011 Alahady, Septambra 30, 2012 Robby Slaughter
Tany am-piandohan'ny lohataona dia nisy hetsika mahatalanjona sy nahafinaritra ary nahafinaritra nanohana fikambanana mahatalanjona antsoina hoe Express Professional Professionals. Ilay fandaharana mihitsy dia andiana mpandahateny mavitrika, ao anatin'izany ny Peyton Manning an'i Indy. Ny mpiasa dia nanatanteraka ny hetsika tsy nisy kilema ary mieritreritra aho fa gaga be ny vahoaka. Raha ny marina dia iray ihany ny fitarainako - ary tsy misy ifandraisany amin'ny andro nitrangan'ny hetsika izany. Mampalahelo fa mampidi-doza io fitarainana io. Ity hetsika ity dia nisy
Nahita fampitahana akaiky indrindra tonga lafatra ho an'ny Facebook sy Google+ aho tamin'ny farany, ary tena ho an'ny zavatra rehetra ny varotra media sosialy. Facebook dia trano frat, ary Google+ dia sorority. Samy manana ny lafiny itovizany ny lafiny lahy sy vavy amin'ny rafitra Greek. Diniho ireto tombony manaraka ireto: Fiaraha-miaina sy finamanana mandritra ny androm-piainana Fahafahana tambajotra matihanina Fifandraisana eo amin'ny olona mitovy hevitra Ireo no sasany amin'ireo fiakaran'ny vidin'ny teny grika tany amin'ny oniversite na oniversite. Fa izahay
Alarobia, Martsa 16, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Robby Slaughter
Mandritra ny orinasa mpanadihady momba ny famokarana ataoko dia manao seminera ho an'ny besinimaro izahay. Manao ny varotra hetsika mahazatra izahay: manana ny microsite izahay, manana ny mailaka mailaka, manana ny rafitra fisoratana anarana an-tserasera. Saingy manana hevitra iray hafa isika fa eritreretintsika ny hanandrana, ary somary adala io. Angamba azonao atao ny manampy milaza aminay raha hevitra tsara na ratsy ity: antsoinay hoe "fisoratana anarana iray-tsindry." Ity ny hevitra.
Ny alahady dia resin'ny Indianapolis Colts ny Tennessee Titans ho lasa Tompondakan'ny AFC South. Talohan'ny lalao, na izany aza, ny tompon'ny Colts Jim Irsay dia nanao fampielezan-kevitra mamirapiratra tanteraka tao amin'ny Twitter. Raha tsy maharaka ny antsipiriany ianao dia andao jerena ny bitsik'i Irsay manomboka amin'ny 31 Desambra: HANDRAY PRIUS SY $ 4K — Amin'ny 1:15 tolakandro izao dia hisy Prius mainty hipetraka amin'ny plaza avaratra ivelan'ny kianjan'i Lucas Oil… HANDEVITRA PRIOSY
Niverina tao amin'ny BlogIndiana 2010, nanao fanombohana malefaka ho an'ny plugin WordPress izahay mba hanampiana amin'ny fampitomboana ny famokarana mpiasa. Antsoina hoe lisitra fitorahana bilaogy izy io, ary miorina amin'ny herin'ny lisitra fanamarinana tsotra nefa mahatalanjona. Ny lisitry ny lisitra fitorahana bilaogy dia toa ny ahoana ihany: mamorona boaty boaty ho anao hampiasaina rehefa manoratra lahatsoratra bilaogy. Azo antoka fa afaka mahavita zavatra mitovy amin'izany ianao amin'ny alàlan'ny rakitra Word na lahatsoratra naoty iray, saingy
Alatsinainy, Novambra 15, 2010 Alatsinainy, May 9, 2016 Robby Slaughter
Ny momba ny fanompana ratsy indrindra azonao raisina amin'ny Internet dia ny fiampangana anao ho mpisandoka. Ny fanafihana hafa rehetra amin'ny toetranao dia tsy manana fahefana mijanona mitovy. Raha vantany vao misy mieritreritra fa spam ianao, dia saika tsy hiverina amin'ny lafiny tsara. Ny làlana mankany spamville dia làlana tokana. Ny tena ratsy indrindra dia mahagaga fa mora ny mandray fepetra mankany amin'ny lasa spammer nefa tsy tsapanao akory! Ireto ny dimy voalohany
Alatsinainy, Aogositra 16, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Robby Slaughter
Ny olana tokana dia ny mailaka miorina amin'ny tranokala tsy dia mahomby. Raha te-hamokatra bebe kokoa ianao noho ny olona antsasa-tapitrisany izay mampiasa mailaka miorina amin'ny tranokala, mifindrà amin'ny mpanjifa mailaka amin'ny birao fotsiny. Izao no antony: